ActiveCampaign: Maninona no manenjika ny bilaoginao ny fanondroana rehefa tonga amin'ny fampidirana RSS RSS | Martech Zone
ActiveCampaign: Maninona no manenjika ny bilaoginao ny fanondroana rehefa tonga amin'ny fampidirana RSS RSS
Zoma, Jona 25, 2021 Zoma, Jona 25, 2021 Douglas Karr
Endri-javatra iray heveriko fa tsy dia ampiasaina loatra amin'ny indostrian'ny mailaka ny fampiasana RSS feeds hamokarana atiny mifandraika amin'ny fampielezana mailakao. Ny ankamaroan'ny sehatra dia manana fiasa RSS izay tsotra be ny manampy feed amin'ny mailakao mailaka na fampielezan-kevitra alefanao. Ny mety tsy tsapanao kosa dia mora mora ny mametraka atiny voafaritra tsara sy voafetaka anaty imailaka fa tsy fahanana bilaoginao iray manontolo.
Ity misy ohatra iray. Miara-miasa amin'ny Royal Spa aho izao, mpanamboatra faritra sy mpanorina tanky mitsingevana. Ny tanky mitsingevana dia fitaovana tsy fahampiana fahatsapana izay manana tombony lehibe amin'ny taonina. Mampiasa mailaka amin'ny fomba voafetra ny orinasa ka tsy mandoka ny mpanjifany foana izy ireo. Satria manana vokatra mikendry mpihaino isan-karazany izy ireo dia mampiasa lisitra mandaitra mba hampisaraka tsara ny mpihaino azy ireo. Kudos ho an'ny masoivohon'izy ireo, Deep Ripples, ho an'ny fametrahana ny fototra ho an'ity sophistication ity.
Nifampiresaka tamin'i Aaron tao amin'ny Deep Ripples aho mba hampiakarana ny tahan'ny valiny amin'ny mailaky ny mpanjifany. Ny fotoana voalohany hitako dia matetika ny orinasa dia nandefa mailaka fohifohy izay tsy nisy famolavolana mahaliana, nampiasa haino aman-jery tamim-pahombiazana, ary tsy nilazalaza tamin'ny fomba feno ireo fiasa sy tombontsoa azo avy amin'ny vokariny. Heveriko fa izany dia lesoka ataon'ny ankamaroan'ny mpivarotra mailaka ankehitriny.
Matetika ny mpivarotra dia mino fa ny mpamandrika dia mamaky haingana ny boaty misy azy ireo a fohy tsara kokoa ny mailaka… tsy voatery ho marina izany. Miady hevitra aho fa tokony hisintona ny sain'izy ireo ianao… fa raha vao manokatra ny mailaka izy ireo dia hanokana fotoana handinihana sy hamakivakiana ilay mailaka avy eo dia hifantoka amin'ireo faritra izay mahaliana azy ireo. Araraoty ny fisokafan'ny mpisera mailaka anao ary manaova mailaka maharitra sy mikorisa izay namboarina tsara, voazara ho fizarana lehibe, misy sary fanohanana tsara, ary antso-to-hetsika matanjaka.
Miaraka amina endrika vaovao, nampiditra fizarana maromaro aho - andalana foto-kevitra mahasarika, lahatsoratra mialoha mialoha, fampidirana / topy maso ny mailaka, teboka bala, firaketana vokatra misy famaritana, bokotra Call To Action, horonantsary YouTube manazava ny fahasamihafan'izy ireo… ary avy eo ny lahatsoratra farany momba ny tanky mitsingevana avy amin'ny bilaogin'izy ireo. Tao anatin'ilay footer dia nasiako koa ny mombamomba azy ireo mba hahafahan'ny mpanaraka manara-dia azy ireo saingy tsy vonona ny handray andraikitra haingana anio.
Fampidirana RSS RSS By Tag Feed
Raha tokony hamboariko ny fizarana manokana ao amin'ny mailak'izy ireo izay nitanisa ireo bilaogy farany sy misy ifandraisany, dia nataoko antoka fa ny bilaogy rehetra navoakan'izy ireo dia voamarika tsara rehefa nanoratra momba ny fitsaboana amin'ny flotation sy tank tank. Ny zavatra mety tsy tsapanao momba ny WordPress dia ny ahafahanao misintona sokajy na feed RSS manokana momba ny tag avy amin'ny tranonkala. Amin'ity tranga ity dia nataoko izany tamin'ny fisintomana ireo lahatsoratr'izy ireo izay efa nasiana marika ankehitriny float. Na dia tsy voarakitra an-tsoratra aza ny ankamaroany, ity ny adiresy fahana ho an'ny tag:
Azonao atao ny mahita ny fihenan'ny URL feed feed:
URL bilaogy: Amin'ity tranga ity https://www.royalspa.com/blog/
tenifototra: Add tenifototra mankany amin'ny lalan'ny URL anao.
Anaran'ny tag: Ampidiro ny tena anaran'ny tag anao. Raha mihoatra ny teny iray ny taganao, dia hyphenated. Amin'ity tranga ity dia marina izany float.
Fahano: Manampia fahana amin'ny faran'ny URL-nao dia hahazo feed RSS sahaza anao ianao ho an'io tag manokana io!
Fampidirana RSS RSS By Category Category
Azo atao ihany koa isaky ny sokajy. Ity misy ohatra iray:
Azonao atao ny mahita ny fihenan'ny URL fahana sokajy (tsy mandeha ilay teo ambony… Nanoratra fotsiny aho ohatra):
URLn'ny tranonkala: Amin'ity tranga ity https://www.royalspa.com/
Sokajy: Raha mitazona ianao Sokajy ao amin'ny firafitra permalink, tazomy eto.
Anaran'ny sokajy: Ampidiro ny anaran'ny tag anao. Raha mihoatra ny teny iray ny sokajy misy anao, dia hyphenated. Amin'ity tranga ity, tanky mitsingevana.
Anaran-tsokajy: Raha manana subcategories ny tranokalanao dia azonao ampiana ireo ao amin'ilay làlana ihany koa.
Fahano: Manampia fahana amin'ny faran'ny URL-nao ary hahazo feed RSS sahaza ho an'io sokajy manokana io ianao!
Rehefa ampidirina ao ActiveCampaignsinga mpamoaka mailaka an'ny RSS RSS, ny lahatsoratra farany be mponina,
miaraka ActiveCampaignMpanonta anao, azonao atao ny mifehy ny sisiny, padding, lahatsoratra, loko sns. Mampalahelo fa tsy mitondra sary isaky ny lahatsoratra izy ireo izay mety ho fanatsarana lehibe.
Manakiana an'io dia miantoka ny fanasokajiana sy fanamarihana araka ny tokony ho izy ny lahatsoratra tsirairay. Orinasa marobe izay averiko jerena ireo tranokala no mazàna mamela ity fanasokajiana mpitsikera ity sy ny angona meta tsy voafaritra, izay handratra anao any aoriana raha maniry hampifangaro ny atiny amin'ireo fitaovana hafa ianao amin'ny alàlan'ny RSS feeds.
Ahoana ny fomba nanatanterahana ny endrika mailaka vaovao?
Mbola miandry ny valin'ny fampielezan-kevitra izahay, saingy manomboka amin'ny fanombohana tena tsara. Ny tahan'ny fisokafana sy ny tahan'ny click-through dia efa mitarika fanentanana efa antitra ary adiny iray fotsiny eo ho eo no tafiditra ao amin'ilay mailaka vao nohavaozina! Nanampy hetsika ho an'izay nijery horonan-tsary koa aho mba hahafahanay mandefa izany any amin'ny ekipa mpivarotra.
Fampahalalana: mpiara-miasa amin'i ActiveCampaign ary ampiasaiko io rohy io mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: ActiveCampaignbilaogyfamahanana bilaogyfitorahana bilaogysokajy fahanasokajy rss fahanafahanafahano handefa mailakaurl feedrss feedrss handefa mailakafeed feedtag rss fahanaWordPressfamahanana wordpress
Fomba ahazoana tombony azo avy amin'ny marika tsy filalaovana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanentana amin'ny lalao
Ahoana ny fomba hanatsarana ny horonan-tsarinao Youtube sy ny fantsonao